Maalinta Caalamiga ah ee Xuquuqul Insaanka awgeed, ayaa ergeyga QM wuxuu fariin udiray dhalinyarada Soomaaliyeed – Kismaayo24 News Agency
by admin 10th December 2019 0110
Muqdisho, 10 Disembar 2019 – Munaasabadda Maalinta Xuquuqul Insaanka awgeed, ayaa ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya wuxuu maanta ugu baaqay dhalinyarada dalka inay sii amba-qaadaan horumarka la gaaray ilaa iyo hadda ee lagu dhowrayo xuquuqul insaanka oo bulshadooda u ah asaas muhiim ah.
“Kor-u-qaadista iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha waa arrin muhiim u ah geeddiga uu dalku ugu jiro gaarista nabad iyo xasillooni. Soomaaliya horumar ayey ka sameysay dhankaas. Iyadoo dhalinyaradu ay yihiin dadka ugu tirada badan dalka, waxaa mas’uuliyad ka saarantahay inay xaqiijiyaan in bulshada Soomaaliyeed ay ku socoto tubtaas,“ ayuu yiri Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud ee QM u Qaabilsan Soomaaliya, James Swan.
“Waxaan ku dhiiri-gelinayaa dhalinyarada inay u doodaan xuquuqdooda iyo xuquuqda dadka kale. Waxaan rajaynaynaa in — iyagoo kaashanaya dadka Soomaaliyeed ee leh da’ kasta iyo qaab nololeed kasta – ay dhisi karaan mustaqbal wanaagsan, “ ayuu raaciyay.
Sida ay sheegeyso qiyaasta, dadka da’doodu ka yartahay 30 sano ayaa u dhigma saddex meelood laba meel kabadan ee dadka Soomaaliyeed – taas oo dalka ka dhigeysa mid kamid ah deegaanada ugu dhalinyarada badan aduunka.
Iyadoo dunida oo dhan looga dabaal-dego 10ka Disembar, ayaa Maalinta Xuquuqul Insaanka waxaa lagu xusaa maalintii [kamid ahayd] sanadkii 1948 ee Golaha loo Dhanyahay ee Qaramada Midoobay uu ansixiyay Baaqa Caalamiga ah ee Xuquuqul Insaanka.
Hal-kudhigga dabaal-degga sanadkan ayaa ah ‘Dhalinyaro u Taagan Difaaca Xuquuqul Insaanka.’ Waxaa ujeeddadu tahay in lagu iftiimiyo awooda ay dhalinyaradu u leeyihiin inay noqdaan qakiilo wax dhisa oo is-bedel keena, [waxaa kale oo loola jeedaa] in lagu xoojiyo codadkooda.
Soomaaliya gudaheeda, Qaramada Midoobay waxaa dhiiri-geliyay tallaabooyinka ay qaaday Dowladda Federaalka ah sanadkan ee ay ku kordhinayso difaaca xuquuqul insaanka ayna ku ilaalinayso waajibaadka caalamiga ah ee saaran. Horumarkaas waxaa ka mid ah dib-ula-hawlgellida ay Dowladdu dib ula hawl-gashay hay’adaha iyo hababka caalamiga ah ee xuquuqul insaanka sida Golaha Xuquuqul Insaanka, ansixinta Heshiiska Xuquuqda Dadka Baahiyaha Gaarka ah qaba, iyo meel marintii Axdiga Haweenka ee Soomaaliya.
Nidaamka QM ee ka hawlgala Soomaaliya waxaa ka go’an in uu taageero kor-u-qaadista iyo ilaalinta xuquuqul insaanka iyadoo loogu danaynayo dadka Soomaaliyeed.
Akhriso: Qodobada loo cogsaday in lasiiyo Gudoomiyhii hore ee Gobolka Banaadir Abaalmarinta Xil-gudasho Qaran
Sakariye Sakariye 3rd February 2018
Sakariye Sakariye 16th January 2018
Daawo: Jubbaland oo soo Bandhigtay Meydadka Saraakiil Alshabaab ka tirsan oo lagu dilay….